အလုပ်အကိုင်နှင့်တိုးတက်မှု: ဂျွန် Leggott ကောလိပ်
The Careers and Progression အဖွဲ့သည်ကျောင်းသားများအားလုံးအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်နှင့်အတူအလုပ်ရှာဖွေရေး၊ သတင်းနှင့်လမ်းညွှန်ရက်ချိန်းယူရန်ခွင့်ရှိသည်။
JLC ပြီးနောက်သင်၏တိုးတက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုသင်လိုချင်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ အီးမေးလ်ပို့ပါ careers@leggott.ac.uk ရက်ချိန်းယူရန်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန် (သို့) ARC ရှိ Katie Tune သို့သွားပါ။
ဆth္ဌမပုံစံကောလိပ်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏အလားအလာများကိုပညာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအောင်မြင်ရန်သေချာစေလိုကြသည်။ ကျနော်တို့အနာဂတ်မှာသူတို့ရဲ့အလားအလာသော့ဖွင့်ဖို့သော့ချက်ပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Leggott ပညာရှင်များအစီအစဉ်သည် John Leggott ကောလိပ် ၀ န်ထမ်းများနှင့်အတူကျောင်းသားများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်အလုပ်ရှင်များ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်ဒေသခံလူထုများနှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ပရိုဂရမ်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများကိုသူတို့၏ CVs များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် John Leggott ကောလိပ်ပြီးနောက်သူတို့၏တိုးတက်မှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြမည်။ သင်နှင့် BTEC ရလဒ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဆsix္ဌမပုံစံပံ့ပိုးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့်နိုင်ငံအဆင့်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာဂုဏ်သိက္ခာရှိသောကောလိပ်တစ်ခုသို့သင်တက်ရောက်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများသည်သူတို့ရွေးချယ်သည့်နေရာသို့တိုးတက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Franklin ကောလိပ်နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ဒေသဆိုင်ရာကွန်ယက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစင်တာနှင့်မိတ်ဖက်အဖြစ်၊ အရှေ့မြောက်ရှိကျောင်းသားများသည်အချို့သောထူးချွန်သောအလုပ်ရှင်များကထောက်ပံ့ပေးသောအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်ပါ ၀ င်လိုလျှင်၊ သင်ဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အပံ့ကိုရှာနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသေးတယ်လား၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီပလိုမာဘွဲ့ဒါမှမဟုတ်အရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖြည့်ဖို့ရှာနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလား။ အလုပ်ရှင်များကို speakers ည့်စပီကာများအဖြစ်လည်းကြိုဆိုပါတယ်။ မဆိုမေးမြန်းချက်များကို။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ 01724 407102 သို့မဟုတ်အီးမေးလ် careeers@leggott.ac.uk
John Leggott ကောလိပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Careers and Progression Team သည်သင်၏ UCAS လျှောက်လွှာအားကျွန်ုပ်တို့၏ကျူတိုရီရယ်ပရိုဂရမ်မှတစ်ဆင့်ထောက်ပံ့မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Academic Advocates နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။
UCAS သည်တက္ကသိုလ်နှင့်ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်အတွက်ရပ်တည်သည်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကတက္ကသိုလ်များကိုရှာဖွေခွင့်ပြုသည်၊ မည်သည့်သင်တန်းများကိုသူတို့ကမ်းလှမ်းသည်နှင့် ၀ င်ခွင့်လိုအပ်သည်။ သင်၏လျှောက်လွှာကိုဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်တင်သွင်းပါ။
သင့်အနေဖြင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် အစိုးရအဓိကဝက်ဘ်ဆိုက် သတင်းအချက်အလက်၊ ကျောင်းသားဘဏ္ဍာရေး လုပ်ငန်းစဉ်။ ဤနေရာသည်သင်၏ကျောင်းသားဘဏ္Financeာရေးလျှောက်လွှာကိုရေးဆွဲမည့်နေရာလည်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်များမှာကျောင်းသားဘဏ္Financeာရေးဂဏန်းတွက်စက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားသင်ရနိုင်ခွင့်ကိုအကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းချက်ပေးလိမ့်မည်။
ကျောင်းသားဘဏ္Financeာရေးဆွေးနွေးမှု JLC မှအင်္ဂါနေ့၊ 10th မတ်လ 2020 (ကြိမ်ချိန် TBC) ။
အကယ်၍ သင်သည်အောက်စ်ဖို့၊ ကင်းဘရစ်ကိုလျှောက်ထားလျှင်သို့မဟုတ်ဆေးသင်တန်းတက်ရန်လျှောက်ထားသူဖြစ်လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ အီးမေးလ်ပို့ပါ careers@leggott.ac.uk သို့မဟုတ် BMAT၊ UCAT နှင့်အခြားကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများအတွက်နောက်ထပ်အထောက်အပံ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ A * spire အဖွဲ့သို့ဆက်သွယ်ပါ။
Unistats - အဆင့်မြင့်ပညာရေးစာရင်းအင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက်တရားဝင်ရက်စွဲနှင့်ကောလိပ်များတက္ကသိုလ်နှင့်ကောလိပ်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုရမှတ်များ၊ ကျောင်းသားများ၏လေ့လာမှုစစ်တမ်း၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်လစာနှင့်အဓိကသော့ချက်ကျသောအချက်အလက်များပါဝင်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောတက္ကသိုလ်လမ်းညွှန် - (တက္ကသိုလ်လိဂ်ဇယားများပါ ၀ င်သည်) အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အကြံဥာဏ်များများစွာပါရှိသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်။ ဒါဟာအစတက္ကသိုလ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စာရင်းပေးပါသည်။
ဘယ်တက္ကသိုလ်လဲ - ကျောင်းသားများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အဆင့်မြင့်ပညာရေးရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုသိရှိနားလည်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန်ကူညီမည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်။
အဆင့်မြင့်အလုပ်သင်တစ် ဦး သည်အချိန်ပြည့်အလုပ်ဖြစ်သည်၊ သင်ဝင်ငွေရနေစဉ်သင်လေ့လာသင်ယူရာနေရာဖြစ်သည်။ အရည်အချင်းများမှာအဆင့်4မှအဆင့်7အထိဖြစ်သည်။ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုပ်ခန့်ထားမည်ဖြစ်သော်လည်းကောလိပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင်ကျောင်းသားတစ် ဦး လည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
Careers Yorkshire နှင့် Humber မှဤထူးခြားသောအရင်းအမြစ်များသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖတ်ရှုစရာများဖြစ်ပြီး Humber နှင့် Lincolnshire jobsရိယာများတွင်လိုအပ်မည့်အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်များကိုလည်းအာရုံစိုက်သည်။ https://lmihumber.co.uk/humber-profile/north-lincolnshire/
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံသည်သင့်အားတန်ဖိုးရှိသောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရရှိရန်နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးသားအလုပ်ရှင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာသောချိတ်ဆက်မှုကကျောင်းသားတိုင်းသည်၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသောကဏ္inများတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများရရှိရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ John Leggott ကောလိပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောအလုပ်အကိုင်စွမ်းရည်နှင့်သူတို့၏အရေးပါမှုကိုအထူးအလေးထားသည် အလုပ်သမားဈေးကွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ခန့်အပ်မှုဆိုင်ရာအကြံပေးသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကို 315 အလုပ်ရှင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်များစွာဖြင့်အမျိုးမျိုးသောကဏ္andများနှင့်အလုပ်အကိုင်နေရာများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကူညီပေးသည်၊ အဓိကအလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုများဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်နှင့်၎င်းသည်တက္ကသိုလ်၊ အလုပ်သင်သို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုအတွက်ဖြစ်စေသင့်လျှောက်လွှာအပေါ်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သင့်အဖွဲ့သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမှတစ်ဆင့်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
နေရာထိုင်ခင်းများသည်သင်နှင့်သင့်အချိန်ဇယားနှင့်အညီစက်မှုလုပ်ငန်းလေ့လာရေးကာလတိုမှတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်နေရာချထားခြင်း၊ ရေရှည်နေရာချထားခြင်းနှင့်အရိပ်အယောင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်လုံးလုံးလျားလျားစီစဉ်ထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဆက်သွယ်ရန်: employability@leggott.ac.uk
အခွင့်အလမ်းများကို: ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဘဏ္Financeာရေး၊
ဘယ်လို Apply မှ: Lenzing ကိုသူတို့၏လေ့လာမှုများ၊ သူတို့ရှာဖွေနေသည့်andရိယာနှင့်သူတို့၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကဘာကြောင့်သူတို့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမလဲဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်အီးမေးလ်ပို့ပါ။
ကုမ္ပဏီ: Phillips က 66
အခွင့်အလမ်း: ဖေဖော်ဝါရီလဝက်ကာလအတွင်းဂဟေ၊ စက်မှု၊ ဓာတုဗေဒနှင့်အထွေထွေအင်ဂျင်နီယာတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပြည့်စုံရန်အခွင့်အလမ်း။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 20 / 12 / 2019
ဘယ်လို Apply မှ: CV နှင့်သက်ဆိုင်သောစာနှင့် CV တင်ပါ။ Havanna, Employability Advisor ။
အခွင့်အလမ်း: Siemens တွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပြီးမြောက်ရန်အခွင့်အလမ်း။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: N / A
ဘယ်လို Apply မှ: သင်၏ CV၊ ပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာနှင့်လျှို့ဝှက်စာချုပ်ကိုပေးပို့ပါ workexperience.gb@siemens.com.
ကျေးဇူးပြု၍ https://new.siemens.com/uk/en/company/education/work-experience.html သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ကုမ္ပဏီ: ထားလိုက်တော့ & Betteridge ရှေ့ရပျ
အခွင့်အလမ်း: ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကျောင်းသားများအားရုံး၏ပတ် ၀ န်းကျင်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေခြင်းအားဖြင့်ဥပဒေ၏လက်တွေ့ကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖော်ထုတ်ပြသသည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးနေရာချထားပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 01 / 03 / 2020
ဘယ်လို Apply မှ: လျှောက်ထားရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ -https://www.sillslegal.co.uk/work-experience-placements/
ကုမ္ပဏီ: Forrester ဘှိုငျဒျ, Grimsby
အခွင့်အလမ်း: ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသူ / သားများစာရင်းကိုင်ဖြစ်လိုသောဤကျောင်းမှထွက်ခွာရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
စာရင်းကိုင်စာရင်းကိုင်ဝင်ခွင့်အဆင့်နွေရာသီ 2020 စတင်သည်
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 29 / 02 / 2020
ဘယ်လို Apply မှ: https://www.forrester-boyd.co.uk/careers
လူတစ် ဦး ၏အလုပ်အကိုင်အလားအလာကိုတိုးတက်စေခြင်း
ထရုစယ်လ်ယုံကြည်မှု: https://www.trusselltrust.org/get-involved/volunteer/volunteer-registration/ (အစားအစာဘဏ်)
British Heart Foundation: Scunthorpe Town Centre, ဆိုင်အတွင်း၌လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနေရာချထားမှုအစီအစဉ်သည်သင့်အားစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွင်းရေရှည်နေရာချထားရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ အလုပ်အကိုင်အတွက်လိုအပ်သောလက်တွေ့နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအာရုံစိုက်သောအလုပ်ရှင်နှင့်အစီအစဉ်တွင်အစီအစဉ်ရှိသည်။ ၄ င်းတို့သည်ကျောင်းသားများ၏လိုချင်သောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိပြီးပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည့်နေ့ကိုတုပရန်ရည်ရွယ်သည်။
စက်မှုဆိုင်ရာနေရာချထားမှုသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ (T Level) အရည်အချင်းအသစ်၏မဖြစ်မနေလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျောင်းသားများသည်ရေရှည်နေရာချထားမှု (315 နာရီ) ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းနေရာများကိုလည်း T အဆင့်အဖြစ်လူသိများနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာအစိုးရမှအကောင်အထည်ဖော်သောအသစ်သောပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအကြားခြားနားချက်သည်တာ ၀ န်သက်တမ်းနှင့်ရွေးချယ်ထားသောသင်ရိုးညွှန်းတမ်းareasရိယာများတွင်သာကမ်းလှမ်းသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဆက်သွယ်ရန်: employability@leggott.ac.uk
entry-level ကျွမ်းကျင်မှုပြတ်လပ်မှုကိုဖြေရှင်း: ကုမ္ပဏီအတော်များများသည် ၀ င်ခွင့်အဆင့်အတွက်သင့်လျော်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုဆွဲဆောင်ရန်ရုန်းကန်နေကြရသည်။ လုပ်ငန်းခွင်နေရာချထားခြင်းများကကျောင်းသားများအားသူတို့၏အလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်အကိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွမ်းကျင်မှုများကိုလုပ်ကိုင်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည် ဒါကသူတို့အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းအတွက်ပိုပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့သေချာစေတယ်။
တန်ဖိုးနည်းခြင်းနှင့်ထိရောက်သောစုဆောင်းမှု၏နည်းလမ်းများ: စက်မှုလုပ်ငန်းများနေရာချထားမှုသည်အလုပ်ရှင်များကိုမရရှိနိုင်သည့်ဒေသခံအရည်အချင်းများဖြင့်စုဆောင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မိတ်ဖက်ပြုခြင်းသည်သင်တို့၏ကျောင်းသားများကိုထိရောက်စွာကြော်ငြာရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ လက်ရှိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလမ်းကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်နေသောကျောင်းသားများအားကြော်ငြာပါ။ စက်ရုံအလုပ်ရုံတစ်ခုထားရှိခြင်းသည်အလုပ်ရှင်အားကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများတတ်နိုင်သည့်အလုပ်အမျိုးအစားကိုတွေ့ကြုံခံစားစေပြီး ၄ င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကိုလိုချင်သောအခန်းကဏ္forတွင်ပုံသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
မတူကွဲပြားမှုအပေါ်တစ် ဦး ကတိကဝတ်: စက်မှုလုပ်ငန်းများနေရာချထားခြင်းသည်သင်၏လက်ရှိလုပ်သားအင်အားနှင့်မတူကွဲပြားမှုကိုရရှိရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မတူကွဲပြားမှုများအပေါ်ခိုင်မာသည့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာကတိကဝတ်ကိုပြသပြီးသင်၏အဖွဲ့အစည်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသောဖောက်သည်များ၏အရေအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးနားလည်စေရန်သေချာစေသည်။
သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သင်ယူမှုလမ်းကြောင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးပါ။ သင်၏ဒေသဆိုင်ရာပညာရေးပံ့ပိုးသူနှင့်မိတ်ဖက်ပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းရှိလူငယ်စွမ်းရည်များကိုပုံသွင်း။ လွှမ်းမိုးရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
သင့်လုပ်ငန်းနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့်သင်တန်းတစ်ခုရှိကျောင်းသား (မ်ား) အား 315 နာရီ၏သက်ဆိုင်ရာနေရာချထားပေးရန်
ကျောင်းသား (မ်ား) အားဤရည်မှန်းချက်များပြည့်မှီစေရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အလုပ်များကိုသတ်မှတ်ရန်
အလုပ်ခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသေချာစေရန်ကျောင်းသားများအတွက်လုံခြုံသည်။
ကျောင်းသားတစ် ဦး ချင်းကို ၄ င်းတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းများနေရာတွင်ရှိစဉ်ကျောင်းသားအားပံ့ပိုးရန်၊ ကြီးကြပ်ရန်နှင့်ကြီးကြပ်ရန်အတွက်မန်နေဂျာ / လမ်းညွှန်ဖြင့်ခန့်ထားရန်။
စီစဉ်ထားသောအစည်းအဝေးများတွင်ကျောင်းသား (များ) နှင့်သူတို့၏နေရာချထားခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးသူအားပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်။
ကျောင်းသားများ (သို့) နေရာချထားပြီးသည့်နောက်တွင်ကိုးကားရန်။
သူတို့ကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသား။ လက်တွေ့ကျပါ။
စုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသင်ဘာလိုချင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ ၎င်းသည် CVs များကိုကျော်ဖြတ်ပြီးစာများဖုံးအုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း / အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျောင်းသားအားလိုအပ်သောလေ့ကျင့်မှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များအပါအ ၀ င်အပြည့်အဝသောသင်တန်းပေးခြင်းပေးပါ။ နေရာချထားခြင်းမပြုမီနေ့လည်စာအစီအစဉ်များ၊ သင့်လျော်သောအဝတ်အထည်များနှင့်စတင် / အဆုံးအချိန်များကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်များကိုပါ ၀ င်ရန်သူတို့သတိပြုရမည်။
ကျောင်းသားနှင့်ပညာရေးပံ့ပိုးသူနှင့်သုံးဖက်မြင်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနေရာချထားရေးသဘောတူညီချက်အားသဘောတူပြီးလက်မှတ်ထိုးပါ။ ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်ရှင်၏တာ ၀ န်ယူမှုအာမခံရှိပါစေ။
လိုင်းမန်နေဂျာ / လမ်းညွှန်ကိုခန့် ထား၍ ကျောင်းသားအားသူတို့၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုပေးပါ။ လိုင်းမန်နေဂျာသည်စာအုပ်စာတမ်းပြီးဆုံးသွားခြင်းကိုသေချာစေရန်၊ ကျောင်းသားအားအပြုသဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်ချက်များပေးရန်၊ တရားဝင်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအတွက်ကောလိပ်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ကျောင်းသားများအားကြီးကြပ်ခြင်း၊ ကောလိပ်မှလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ပြီးစက်မှုနေရာချထားမှုအဆုံးသတ်တွင်နောက်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်သင့်သည်။ ဆရာတစ် ဦး ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
အီးမေးလ်ပို့ ကျေးဇူးပြု. employability@leggott.ac.uk ပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖော်ပြရန်။ သင့်အားဖော်ပြရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည် -